URanavalona III: indlovukazi yokugcina yaseMadagascar - Afrikhepri Fondation
ulwesihlanu, januwari 15, 2021
NngoNovemba 22, 1861 e-Amparibe (igama lakudala lenhlokodolobha: i-Antananarivo) INkosazana uRazafindrahety owaziwa kangcono ngaphansi kwegama leNdlovukazi uRanavalona III wayeyindlovukazi yokugcina yobukhosi bakwaMerina obabusa iMadagascar ngaphambi kokuthatha isiqhingi ngumbuso wamakholoni waseFrance.
URazafindrahety waba yindlovukazi yaseMadagascar ngo-1883, ngokushona kweNdlovukazi uRanavalona II, usingamama wakhe. Umyeni wakhe uCrown Prince Ratrimoarivony ushone ngemuva nje kukanina ngaphansi kwezimo ezingaqondakali. Ngemuva kokushona komyeni wakhe, uRazafindrahety wathweswa umqhele eneminyaka engama-22 eyiNdlovukazi uRanavalona III waseMadagascar. Lapho ebekwa esihlalweni sobukhosi, lesi siqhingi sase sisongelwa ukuhlaselwa amabutho amakoloni aseFrance. Impi yombango yahlala kusuka ku-1883 kuya ku-1885, iMadagascar ayisekeli ukuhlasela kwamakholoni esiqhingini sabo, kepha ngokushesha okukhulu ukuvukela kulawulwa ngabakholoni baseFrance.
Abakholoni, besebenzisa ibhaxa lokuza kwabo kulesi siqhingi ukuzosisiza ukuba sibe sesimanjemanje, bamangala ukubona uhulumeni weNdlovukazi wenza izwe libe ngesimanje ngokushesha nangendlela efanele ukukhombisa ukuthi isiqhingi saseMadagascar sasiyizwe eliphucukile futhi elizimele. Ukunqanda umfutho wesimanje sesiqhingi, amakholoni aqhumisa amabhomu emadolobheni asenyakatho nasempumalanga yesiqhingi athatha iTamatave.
Ngaphandle kokufuna ukuxoxisana nganoma yikuphi ukusuka nokunciphisa ukusebenza kwesiqhingi, umbutho wamasosha asemakoloni ubamba uDiego-suarez futhi umemezele isiqhingi saseMadagascar njengomvikeli waseFrance naphezu kokungavumelani kweNdlovukazi uRanavalona noNdunankulu. Inqubomgomo kanye nezimali zangaphandle zingaphansi kwezwe laseFrance. Lesi sivumelwano esibekiwe nesintekenteke asiqinisekisi nakancane ukuthula futhi sibophezela iMadagascar ukuthi ikhokhele iFrance.
Ukufeza lokhu, uhulumeni waseMadagascar uthatha imalimboleko kuComptoir Nationale d'Escompte de Paris (CNEP), imali engenayo yamasiko amachweba ayo ayisithupha (iTamatave, Majunga, Fénérive, Vohémar, Vatomandry neMananjary) kuvikelekile lapho. Ukunikezwa okukhulu kunikezwa abaseFrance: ukugawulwa kwemithi, ukukhishwa kwethusi ezweni, ukunikezwa kwegolide eBoina. Imali enganele yentela ayimvumeli uhulumeni ukuthi akhokhe imali ebolekwe kwi-CNEP, ukuyilungisa amandla amakoloni ababaphoqa ukuthi banyuse intela futhi bandise imisebenzi yabakhile esiqhingini.
Ngaphandle kwemizamo eminingana yokuqeda ukubuswa kwamakoloni ezweni, uhulumeni weNdlovukazi uRanavalona III wehlulekile ukuqeda abahlaseli futhi ukuhlasela okuphelele kwezwe kwaphela ngo-1895 ngaphansi kokulawulwa nguGeneral Duchesne, Ibutho laseFrance liwayeka phansi amasosha endlovukazi futhi lithathe inhlokodolobha ngoSepthemba 30, 1895. UNdunankulu wakhululwa emisebenzini yakhe futhi esikhundleni sakhe kwangena obambisene nombuso wamakoloni. Agasti 6, 1896 iMadagascar imenyezelwa njenge "koloni laseFrance" emhlanganweni kazwelonke. INdlovukazi uRanavalona izogcina amandla okukhohlisa izinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuboshwa ngokuzuma ebusuku ngoFebhuwari 28, 1897, nguGeneral Gallieni. Yena nawo wonke umndeni wakhe bathunyelwa ekudingisweni eReunion Island base beya e-Algeria lapho afela khona ngoMeyi 23, 1917.
INdlovukazi uRanavalona III: Idrama yomlando
Thenga i- € 54,90
Kugcine ukubuyekezwa ngoJanuwari 14, 2021 8:20 am
UMongameli waseTanzania uhola indlela ngokuthatha udoti emgaqweni